အီးမေးလ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - သင်မပေးပို့ခင်အဆင့် (၁၃) ဆင့်။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 7, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်တိုင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ပရိသတ်သည်စာရင်းသွင်းသူ ၄,၇၀၀ ကျော်အားပေါက်ကွဲစေခဲ့သည်။ ငါပို့ပေးခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းမပြုမီအပတ်တိုင်းဖြတ်သန်းသွားသောကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များနှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုမျှဝေချင်သည်။
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာလား ထိုက်တန်, သက်ဆိုင်ရာ, မျှော်လင့်ထားနှင့်တန်ဖိုးရှိသော စာရင်းသွင်းသူသို့ အကယ်၍သာ မဟုတ်ပါကမပို့ပါနှင့်။
သင်အီးမေးလ်ပို့ပြီးသည်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုလက်ခံရရှိသူမြင်သောအချက်နှစ်ချက်သာရှိသည်။ ပထမမှာအီးမေးမှမည်သူဖြစ်သည်။ မင်းလား နာမည်ကနေ တစ်ခုချင်းစီကိုပေးပို့နှင့်ကိုက်ညီ? သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမှတ်မိနိုင်ပါသလား။
ဒုတိယ element ကမင်းပဲ ဘာသာရပ်လိုင်း။ မြည်းကကန်လား အကြောင်းအရာတခုခုကိုဖတ်ရှုဖို့အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ချင်တာလား။ အကယ်၍သာ မဟုတ်ခဲ့လျှင်၊ ဤအချက်ကိုရိုးရှင်းစွာဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
သင့်တွင်ပုံများရှိပါက၊ alt tag များ ပုံများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စာဖတ်သူကိုတွန်းအားပေးမည့်သို့မဟုတ်အခြားပုံများမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အခြားရွေးချယ်စရာစာသားများကိုရေးရန်?
သင်၏ layout ကိုဖတ်ရန်လွယ်ကူပါသလား မိုဘိုင်း device ကို? အီးမေးလ်အားလုံး၏ ၄၀% ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ယခုဖတ်ပြီးအရေအတွက်ကနှစ်စဉ်ဆက်လက်တိုးပွားနေသည်။ သင့်တွင်ရှည်လျားသောနောက်ခံစာပါသောအီးမေးလ်တစ်ခုရှိပါကစာဖတ်သူသည်နောက်သို့လှည့်ထွက်သွားရန်စိတ်ရှုပ်သွားလိမ့်မည်။ ဖျက်ပစ်ခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းသည် ပို၍ လွယ်ကူသည်။
အကယ်၍ သင်သည် HTML format ဖြင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပါကရှေးရှေးလူကြီးများကလစ်နှိပ်ရန်အတွက် header ထဲတွင်ကောင်းမွန်သော link တစ်ခုရှိနေသည် အီးမေးလ်ကိုဘရောင်ဇာတစ်ခုတွင်ကြည့်ပါ?
သင်အီးမေးလ်ကိုစစ်ခဲ့ပါသလား စာလုံးပေါင်း, သဒ္ဒါ Junk Email ဖိုင်တွဲထဲကိုသင်စစ်ထုတ်နိုင်မယ့်ဝေါဟာရတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းလား။
အီးမေးလ်ကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်စာဖတ်သူအားသင်ဘာလုပ်စေလိုသနည်း။ သငျသညျအကြီးအပေးခဲ့သလား call-To-action ကို သူတို့ကိုကြောင်းအရေးယူ?
စာဖတ်သူကိုမေးနိုင်သည့်ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များရှိပါကသင့်အားကူညီလိမ့်မည် ပစ်မှတ်နှင့်အစိတ်အပိုင်း သင်ပေးပို့လိုက်သည့်အကြောင်းအရာများကဘာလဲ။ အီးမေးလ်တစ်စောင်စီတွင်အချက်အလက်အဘယ်ကြောင့်မတောင်းဆိုသနည်း။
မင်းလုပ်ခဲ့တယ် အီးမေးလ်ကိုစမ်းသပ်ပါ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောညှို့များနှင့်ပြောင်းလဲနေသောပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများမည်သို့ပြသနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သောနှင့်မရှိသောစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ link အားလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သလား
မင်းချက်ချင်းလုပ် အမှတ်ရ သို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အပိုဒ်မှတဆင့်ငြီးငွေ့? လူတွေကအလုပ်များနေကြတယ်။
သင်တစ် ဦး နည်းလမ်းများနှင့်အတူရှေးရှေးပေးနေပါသလား အပြင်ထွက် အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှု မရရှိလျှင် - သင်သည်ကြီးစွာသောခွင့်ပြုချက်ကို အခြေခံ၍ သင်အမှန်တကယ်သွားရန်လိုအပ်သည် အီးမေးလ်ထောက်ပံ့သူ.
သင်တစ် ဦး လမ်းနှင့်အတူရှေးရှေးပေးနေပါသလား အကြောင်းအရာမျှဝေ သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းခလုတ်သို့မဟုတ်လူမှုမျှဝေရေးခလုတ်များမှတဆင့်လား။ အကယ်၍ သူတို့ကမျှဝေမယ်ဆိုရင် - မင်းရဲ့မြေပုံစာမျက်နှာမှာ subscribe option ရှိသလား။
ငါအီးမေးလ်များကိုမှစဉ်ဆက်မပြတ်စာရင်းသွင်းပြီးဖျက်သိမ်းသည်။ ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစာရင်းသွင်းတဲ့အခါသံသယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအမြဲပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဆီကနေအီးမေးလ်တွေပိုများများဖျက်ပစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ခြင်းငါပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ ကုမ္ပဏီ။ သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့ချင်တယ်ဆိုရင် - သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုယဉ်ကျေးပြီးလေးစားပါ။